ओलीविरुद्ध किन खनिए बाबुराम ? यस्तो छ कारण – रिपोर्टर्स नेपाल
ओलीविरुद्ध किन खनिए बाबुराम ? यस्तो छ कारण
२०७५ माघ २९ गते प्रकाशित, l १२:५५
काठमाडौं, २९ माघ । नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईले जनअपेक्षा अनुसार अहिलेको सरकार हिँड्न नसकेको आरोप लगाए । स्वदेशमै रोजगारी प्राप्त, गरिबीको रेखामुनीबाट माथि पुग्ने, कलकारखाना खुल्ने लगायतका अपेक्षा जनताले राखे पनि यो सरकारले यतातर्फ ध्यान दिन नसकेको उनको ठम्याइ छ ।
उनले अलिअलि विकास त राणाकाल र पञ्चायती व्यवस्थामा पनि भएको भन्दै अहिलेको सरकारले विकासमा फड्को मार्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । मेची-महाकाली यात्रामा रहेका डा भट्टराईले भने, ‘ प्रगति त अलिअलि सधै भइराख्छ अहिले पनि भा छ । राणाले पनि बिजुली बालेका थिए । त्रिचन्द्र क्याम्पस खोलेका थिए । त्यो ठूलो कुरा हैन । जनता के चाहन्छन् भन्ने हो ।’
आर्थिक क्रान्ति ल्याउनु पर्नेमा दुई तिहाइको सरकार आफै अलमलमा परेको भन्दै उनले चिन्ता समेत व्यक्त गरेका छन् । उनले केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रवादप्रति कटाक्ष गर्दै भने,‘साथीहरु राष्ट्रवादको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो सीमानामा एउटा पनि सुरक्षाकर्मी रहेनछन् उतापट्टीका सुरक्षाकर्मीमात्र रहेछन् ।’
भ्रष्टाचार बढ्नु दुःखद भन्दै उनले ‘सत्तामा पुगेपछि साथीहरु झिँगा कता लत्पतियो भनेजस्तो भएको छ, यो गलत भयो, भ्रष्टाचार बढ्योे । उनले वाइडबडी प्रकरण दुःखद भयो भन्दै कमिशनका लागि गराइएको घटनाको गम्भीर छानबिन गरी दोषीलाई कडा कार्वाही गर्न पनि माग गरेका छन् ।
बाबुरामलाई करिश्मा बोझ, पार्टी छोड्दा खुशी !
करिश्माले किन छोडिन बाबुरामलाई ? अब ओली र प्रचण्डलाई यसरी रोज्दैछिन (भिडियोसहित)
प्रधानमन्त्री ओलीलाई बाबुरामले सतर्क बनाए